Hatanjaho amin'ny Internet ny CD-nao Marketing Martech Zone
Zoma, Aprily 26, 2013 Mike Cunsolo
Efa teo daholo isika rehetra sa tsy izany. Miasa mafy amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny varotra ataon'ny mpanjifanao, manao ora adaladala sy asa maro toa ny tsara indrindra amin'izy ireo. Miezaha manao izay tsara indrindra vitanao mba hahazoana antoka fa efa milamina ny zava-drehetra, mba hizotra araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra rehefa mandeha ianao. Azo antoka fa teo aho ary tsy nahalala ny ora maro nandaniako nihazakazaka toy ny adala. Saingy ny fientanam-po dia ampahany lehibe amin'ny antony anaovanao ahy satria avy eo mandefa ianao ary hitanao fa manomboka mandoa ny asa mafy rehetra.
Mifandray amin'ny atiny ny olona ary mizara izany. Ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika mpanjifanao dia mitombo ary ny sisa ataonao dia ny mipetrapetraka mijery ny fiovan'ny haino aman-jery sosialy mivadika tranokala. Fotoana hanokafana ireo labiera.
Fa avy eo, eo am-panokafana ny tavoahanginao faharoa dia ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga! Ny tranokalanao dia mijanona mijanona eo ambany fihenan'ny fivezivezena. Amin'izao fotoana izao dia tsy dia betsaka ny azonao atao raha tsy efa manana backup amin'ny toerany ianao (afa-tsy ny manokatra labiera faharoa).
Amin'ny maha-Manager Digital Marketing ahy dia mila fantatro fotsiny fa hivadika ho fiovam-po ny fampielezankevitra ataoko. Tsy manam-potoana foana aho (na ny fahalalana ara-teknika raha manao ny marina aho) hieritreretana ny hoe ny toerana alefantsika mpanjifa mety ho hijoro amin'ny fidiran'ny fifamoivoizana.
Ary eo no misy CDNify afaka manampy anao.
CDNify dia Startup iasako ho CMO, natsangan'i James Mulvany. Ny fomba tsara indrindra ilazana ny james dia mpamorona. Izy dia karazan'olona mahatakatra ny fomba hakana zavatra sarotra ary manamora ny fifandraisan'izy ireo. Ary izany no ataon'ny CDNify. Mila zavatra izay matetika mahasosotra ny manao azy sy manatsotra azy.
Raha efa nanandrana nampihatra a fifandraisana an-tariby (CDN) teo aloha, ho hitanao fa tsy ny zavatra mora indrindra hampiodina ny lohanao. Ny fomba fiasa ao amin'ny indostria dia 'iray habe mifanaraka amin'ny rehetra', izay fomba azo antoka hamelana ny tenanao tsy hanana am-paosy sy handoa ny serivisy tsy ilainao. Ity dia zavatra ezahantsika ovaina.
CDNify dia tamba-jotra fandefasana atiny izay mahatonga azy io ho mora foana amin'ny fahazoana CDN miasa. Haingana ny fanombohana ary ny tsara indrindra, dia mitaky ny atiny ary manatitra azy io haingana kokoa ho an'ny mpihaino anao - izay midika fa tsy mila miahiahy momba ireo zavatra sarotra ianao ary afaka mifantoka amin'ny famoahana fanentanana mahagaga.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana CDNify dia azonao atao ny manao veloma ny paikadin'ny fampielezan-kevitra mandondona ny tranokalanao ivelan'ny toerana. Satria CDN 'federated' izahay dia afaka manaparitaka ny atiny manerana ny tamba-jotra rahona izahay, mampihena ny fotoana fandefasana entana ary manome antoka fa afaka miatrika fiakaran'ny fifamoivoizana ny tranokalanao. Izy io koa dia mahatonga azy io ho mora vidy kokoa ary midika hoe mandoa ny angon-drakitra ampiasainao fotsiny ianao.
Ny tombony lehibe ho an'ny a federasiona dia ny ahafahantsika mitsangantsangana eo anelanelan'ny tamba-jotra rahona samihafa, ahafahantsika manatitra haingana ny atiny miorina amin'ny toeran'ny mpihaino anao. Manome traikefa haingana sy mahafinaritra kokoa ho azy ireo izany ary manampy anao hampitombo ny valin'ny fampielezan-kevitrao amin'ny alàlan'ny fanovana ny mason-tsofina ho tsindry.
Manana isika izao POP 40 manerantany ary ampitomboinay hatrany ity tamba-jotra ity. Izahay koa dia miasa amin'ny fampifangaroana isan-karazany mba hanamorana ny ezaka marketing anao na inona na inona sehatra atolotrao izany fampielezan-kevitra izany.
Azonao atao ny misoratra anarana mandritra ny roa herinandro amin'ny fitsarana www.cdnify.com ary eo an-tanana izahay hanampy anao hanomboka.
Mike Cunsolo dia CMO an'ny CDNify, tamba-jotra fandefasana atiny izay manamora ny fahazoana CDN miasa.
Ny Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia mila sary